LG enweworị onye zụrụ ahịa: Vingroup, otu ụlọ ọrụ ahụ zụtara BQ | Gam akporosis
Ignacio Sala | | Ngwa gam akporo, LG
Fewbọchị ole na ole gara aga, asịrị malitere ịgbasa na onye nrụpụta Korea LG mere atụmatụ ire nkewa ama ya, mgbe ha gbakọchara ọnwụ nke $ 4.500 nde n'ime afọ 5 gara aga. Dị ka afọ gara aga, otu ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ gọrọ akụkọ ahụ.
Lọ ọrụ mgbasa ozi nke wepụtara ozi a, The Elec, kwuru na ụlọ ọrụ Korea ahụ ezigarala ndị ọrụ ya niile ozi nke ọ na-ekwupụta na ga-akpọsa ire ere na njedebe nke ọnwa na ndị ọrụ niile ga-akwụsị mmepe ha niile belụsọ mpịakọta ama ama ekwuputara na CES gara aga.
Guysmụ okorobịa ahụ si na ndị uwe ojii gam akporo kpọtụrụ ọnụ na-ekwuchitere ụwa LG iji kwado ma ọ bụ gọnarị ozi ọma ahụ. Dị ka Hong si kwuo na nkwụsị ahụ bụ 'kpam kpam ụgha na-enweghị ntọalaNa mgbakwunye na ịkwado ahụike akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ahụ dị mma. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Elec wepụrụ ozi ọma ahụ. Agbanyeghị, ihe ejije ncha anaghị akwụsị ebe ahụ.
Akụkọ kacha ọhụrụ metụtara opera ncha a sitere na Korea Herald. Dị ka usoro a si kwuo, ụlọ ọrụ zigara ndị ọrụ ya akwụkwọ ozi nke Onye isi oche Kwon Bong-seok bịanyere aka na nke ọ na-ekwu na
N'agbanyeghị mgbanwe ọ bụla na nduzi nke azụmahịa smartphone, ọrụ ga-adịgide ka enweghị mkpa ichegbu onwe gị.
Na nkwupụta site na ọnụ na-ekwuchitere LG na verge, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ederede a ziri ezi, na LG nọ na-atụle ire, ịbelata ma ọ bụ ịwepu n'ahịa ahịa ama.
Vingroup nwere mmasị n'ịzụ LG
Ozi kachasị ọhụrụ metụtara ire ahịa LG nwere ike ịchọta na BusinessKorea. Dabere na onye okwu a, ndị Vietnamese conglomerate Vingroup Co (ụlọ ọrụ zụtara Spanish ika BQ ịhapụ ya ka ọ bụrụ akara aka ya), bụ onye isi akwukwo ịzụta LG's smartphone business.
Vingroup Co na-eweta 15% nke ahịa ahịa na Vietnam ma ọ bụ ugbu a bụ nke atọ kachasị ama ama na Vietnam, n'azụ Samsung na Oppo. Isi mkpali nke otu a bu ahịa ahịa nke LG nwere ugbu a na United States, 12,5%
Site na ịzụta LG, Vingroup nwere ike mfe ịbanye US ahịa, A ahịa na Samsung na Apple na-fọrọ nke nta kewara dokwara na ebe anyị na-ahụkwa Motorola na LG, nke ikpeazụ a obere nta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » LG enweworị onye zụrụ ahịa: Vingroup, otu ụlọ ọrụ ahụ zụrụ BQ
N'oge na-adịghị anya, Xiaomi ga-ebupụta ụdị nke Mi 10 na Qualcomm's Snapdragon 870
A na-ekwuputa Honor View 40 na Dimensity 1000 + na 66W ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ